Yedikuyular Ski Center oo ka socota Istanbul Buyuksehir | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean46 KahramanmarasQeexida Yedikuyular Kayak Center oo ka socda Metropolitan
Qeexida Yedikuyular Kayak Center oo ka socda Metropolitan
17 / 12 / 2018 46 Kahramanmaras, Coast Mediterranean, GUUD, TURKEY, TELPHER
Sharaxaadda xarunta barafka
Xarunta Yedikuyukar Ski ayaa maalmihii ugu dambeeyay la xiriirtay warar qaar oo lagu faafiyay qeybo ka mid ah Degmooyinka Magaalada Kahramanmaras ee kuyaalla Caasimadda.
Sharaxaadda Qoraalka ah ee Yedikuyukar Ski Center ee ka socota Degmadda Metropolitan: Y Yedikuyular Ski Center maalmihii ugu dambeeyay saxaafadda iyo warbaahinta bulshada ee wararka iyo faallooyinka ku saabsan wararka;
Dhismaha Xarunta Ski Center oo ay leedahay Degmadeena Magaalo Weyn ayaa laga fuliyay baaxadda Sharciga Qaanuunka Dadweynaha ee 4734 waxayna leedahay shaqooyin la xiriira dhismaha gabi ahaanba. Ma jiro wax qodob ah oo la xiriira ganacsi kasta oo ku saabsan xaddidan qandaraaskan.
Yedikuyular Ski Center oo la furay 2017-2018 xilli ayaa waxaa maamushay Dowlada Hoose ee Magaalooyinka bilowgii. Muddadan, waxaa la isku dayey in la fuliyo shaqaalaha ka shaqeeya cutubyo kala duwan oo ka tirsan Dawladda hoose laakiin aan lahayn xirfad ku filan oo ay ku fuliyaan hawshaas. Si kastaba ha noqotee, marka loo eego carqaladeynta la soo deristay bixinta adeegyada iyo cabashooyinka ay ka heleen muwaadiniinta adeegga ka hela xarunta, fikradda ah in howlgalka ay fuliyaan koox xirfadlayaal ah oo dheeraad ah si loo helo adeeg ka wanaagsan xarunteenna Ski ayaa la sameeyay. Dib-u-eegista ay sameysay Maamulkayaga Xarumaha kale ee Ski, waxaa lagu arkay in tas-hiilaadka noocan oo kale ah aysan si toos ah u shaqeynin shacabka ayna fuliyaan kooxo / shirkado xirfadlayaal ah. Marka laga hadlayo caafimaadka iyo badbaadada shaqada, ganacsiga waxaa fuliya koox xirfad-yaqaan ah waxaana loogu talagalay in laga fogaado wixii dhibaato ah.
Sababahan dartood, waxaa la go'aansaday in laga kireeyo Ski Resort si looga dhigo mid xirfad leh. Laga soo bilaabo bishii Agoosto, daraasado cayiman ayaa la bilaabay.
Ka shaqeynta Xarunta Ski Yedikuyular iyo Goobta Madadaalada waa qandaraas kiro ah waxayna ku xiran tahay Sharciga Wax Soo iibsiga ee Gobolka No. 2886. Degmadeenna waxay go’aansatay inay ku shaqeyso xarumahan 06 sanadka iyadoo loo adeegsanayo 2018 / 2018 Resolution taarikhda Noofembar 708 iyo lambar 2 / 800.000 iyo macnaha guud, qiimaha kirada sanadlaha ah ee kiraynta ayaa loo go'aamiyaa sida 2 TL + VAT. Maaddaama qiimaha la go’aamiyay uu yahay 1.6000.000 sanadle ah, waxaa waajib ku ah in la sameeyo ogeysiiska ugu horreeya ugu yaraan 10 maalmood kahor hindisada iyo ogeysiiska labaad ugu yaraan maalmo 5 ka hor. Qandaraasyada waxaa la sameeyay taariikhda 27.11.2018, iyo ogeysiiskii ugu horreeyay waxaa laga sameeyay qaranka (Bariga Dhexe) iyo maxalliga (Kahramanmaraş Maanta) wargeysyada taariikhda 15.11.2018 iyo ogeysiiska labaad ayaa lagu daabacay maxalliga (Kahramanmaraş Maanta) wargeysyada taariikhda 19.11.2018. Intaas waxaa sii dheer, in kasta oo aysan jirin wax waajib sharci ah ah, haddana ogeysiiska waxaa lagu soo daabacay degelka Degmooyinka hortiis qandaraaska si loo gaaro hindise-bixiyeyaal badan. Tixgelinta ay khusayso waxay ku xiran tahay 2886 ee Sharciga Wax Soo iibsiga Gobolka No. 45. iyadoo la raacayo nidaamka qandaraaska furan. Waa hindise furfuran oo u furan dhammaan kuwa buuxiyey shuruudaha qandaraaska. Qandaraasyada waxay dhalisay bixinta% 900.000 saamiga faa'iidada sanadlaha ah marka lagu daro qiimaha kirada ee 20.-TL + VAT degmooyinkayaga. Hawsha saxiixa heshiiska ayaa sii socota.
Mar labaad, iyadoo ay sabab u tahay hindisada ay sameysay Xarunteenna Ski, oo laga maamuley tas-hiilaadka Degmadeenna sannadkii hore, ayaa ilo dheeraad ah la siiyay Degmadeena iyadoo qaadanaya saamiga 900.000.-TL kirada iyo macaashka 20%.
Sidaa darteed, waxaa loo arkaa in wararka iyo faallooyinka lagu faafiyo warbaahinta iyo warbaahinta bulshada ay yihiin kuwo ku dhisan ama aan war haynin iyo in qandaraaska lagu fuliyay si waafaqsan sharciga.
Wasiirka Pakdemirli oo ku amaanay Xarunta Dhexe ee Yedikuyular
Yedikuyular Ski Centre ilaa Nolosha
Saxiixyada Xarunta Dhexe ee Yedikuyular
Xarunta Ski-ga Yedikuyular Sii Socota
Xarunta Dhexe ee Yedikuyular
Wadada Asphalted to Yedikuyular Ski Center
Yedikuyular Ski Center Diyaarinta Xilliga Jiilaalka
Asphalt wuxuu ka shaqeeyaa Wadada Ski Center Yedikuyular
Yedikuyular Ski Center, barafka ugu horeeya ee xilliga
Warqadaha Duulimaadka Qorshaha Racing 1. Drone Won
Eastern Express mar kale waa jecel yahay dalxiiska jiilaalka